WordPress: Ku rakib Jetpack iyo Enable Hovercards | Martech Zone
WordPress: Ku rakib Jetpack iyo Enable Hovercards
Talaado, Agoosto 30, 2011 Arbacada, Oktoobar 26, 2011 Douglas Karr
Waxyaabaha ugu horreeya marka hore… miyaad koonto ku leedahay Gravatar.com? Tag hada mid sameyso oo awood u yeelo astaantaada guud. Kudar shabakadahaaga bulshada, sharaxaad, iyo dhowr sawir. Sababta
Gravatar's ayaa guud ahaan loo isticmaalaa in lagu soo bandhigo sawirkaaga halka aad waligaa iska diiwaangeliso ama aad ka tagto faallo iyo cinwaanka emaylkaaga. Ha walwelin - ma xadaan ama ma muujiyaan cinwaanka emaylkaaga, waxay abuuraan fure haash ah… furaha xashiishka ayaa ah magaca faylka ee sawirkaaga. Waa nidaam fiican oo ammaan ah. Gravatars muddo ayey soo jireen - laakiin hadda waxaad sameyn kartaa astaan ​​bulsheed oo dhameystiran Gravatar.com. Iyo, tan iyo markii ay u suuro gelineysay astaamaha dadweynaha ee Gravatar, dadka fiiqan ee Automattic (sameeyayaasha WordPress) ayaa mashquul ahaa.
Waxaa laga yaabaa inaad ku ogaatay guddigaaga maamulka ee WordPress inaad hadda awood u yeelan karto Jetpack gudaha WordPress. Waa taxane taxaneyaal waaweyn ah oo loogu talagalay WordPress kuwaas oo loogu talagalay isticmaalka sare oo lagu martigaliyo daruuraha. Mid ka mid ah muuqaalkaas ayaa ah Kaadhka kaadhka. Haddii degelku awood u yeesho Hovercards (run ahaantii xitaa uma baahnid inaad noqotid degel WordPress ah), waad jiiri kartaa jiir kasta oo gravatar ah waxayna soo bandhigi doontaa astaantaada. Waxay kor u qaadeysaa inay si fiican ula shaqeyso mawduuceena:
Hovercards-ka ayaa jiray tan iyo bishii Oktoobar ee la soo dhaafay, laakiin runti hadda caan bay noqdeen Jetpack ayaa qabanaya. Kaliya sawir dul saar, oo si toos ah ayaad uheli doontaa astaanta adeegsadahaas! Macaan! Haddii aadan haysan degel WordPress ah, weli waad isticmaali kartaa Gravatars (hawl fudud oo PHP ah) iyo Hovercards (jQuery oo lagu daray qoraalka Hovercard).
TweetTwo: Fariin Sax ah, Waqti Saxan, Meel Saxan
Horumarinta Shakhsi ahaan waa Sawir, ee ma ahan Jiidida
Agoosto 30, 2011 saacaddu markay ahayd 6:39 PM
Agoosto 30, 2011 saacaddu markay ahayd 6:40 PM
Hmm, si la yaab leh, Doug, sawirkaagu wuxuu muujinayaa soohdinta sida ay u dhow dahay inay soo shaac baxdo laakiin waligeed ma soo bandhigeyso faahfaahinta oo kaliya waxay muujineysaa wareejiye aan xad lahayn Markaan dhagsiiyo, Gravatar wuxuu leeyahay isticmaale lama helin. Qaar ka mid ah qorayaasha wax ku qora bartaada internetku way shaqeeyaan, laakiin, markaa waxaan u malaynayaa inay wax ka khaldan yihiin Gravatar-kaaga.
Maxaad sidaas iigu yeeraysaa, Tolga? 😉 Waan ogahay - Waxaan u maleynayaa inay wax igu leedahay aniga oo maamule ah maxaa yeelay waxay la mid tahay maamulayaasha kale. Waan ka shaqeynayaa… miyaanay ahayn inaad ogaato!
Go'an Tolga! Waxaan gartay inaanan ku darin cinwaanka emaylka ee aan u adeegsanayay Suuq-geynta Teknolojiyada ee Gravatar. Oobow!